Factory fitoeran-tsakafo plastika | China Mpanamboatra fitoeran-tsakafo plastika, mpamatsy
Kaontenera mahitsizoro kintana kintana 1L LJ-3521
LONGSTAR kintana diamondra boribory sakafo fitoeran-javatra, vita amin'ny sakafo kilasy fitaovana, dia azo antoka sy mahasalama. Amin'ny tery tsara, ny peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara, raha feno lasopy dia tsy hararaka. Tsy mahazaka hafanana izy io ary mety hafanain'ny mikraoba, saingy aza atao ao anaty lafaoro misy microwave izany, azafady; Izy io koa dia fanoherana ny hatsiaka, azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana, mora tehirizina ny sakafo, ary madio sy milamina ny vata fampangatsiahana; Azo ampiasaina amin'ny kabinetra, oven lafaoro, vata fampangatsiahana ...
Kaontenera mahitsizoro kintana kintana 2.1L LJ-3522
Kintan'ny sakafo boribory kintana diamondra 320ml LJ-3523
LONGSTAR kintana diamondra boribory sakafo fitoeran-javatra, vita amin'ny sakafo kilasy fitaovana, dia azo antoka sy mahasalama. Amin'ny tery tsara, ny peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara, raha feno lasopy dia tsy hararaka. Tsy mahazaka hafanana izy io ary mety hafanain'ny mikraoba, saingy aza atao ao anaty lafaoro misy microwave izany, azafady; Izy io koa dia fanoherana ny hatsiaka, azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana, mora tehirizina ny sakafo, ary madio sy milamina ny vata fampangatsiahana; Azo ampiasaina amin'ny kabinetra, lafaoro microwave, vata fampangatsiahana ...
Star diamondra boribory sakafo container 650ml LJ-3525
Kintan-tsakafo boribory kintana diamondra 1.1L LJ-3526
Kintana fitahirizana diamondra kintana container370ml LJ-3520
Kaontenera kintana diamondra kintana 1.7L LJ-3519
Fitoeran-tsakafo diamondra kintana LONGSTAR, vita amin'ny akora ara-tsakafo, azo antoka sy mahasalama izy io. Amin'ny tery tsara, ny peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara, raha feno lasopy dia tsy hararaka. Tsy mahazaka hafanana izy io ary mety hafanain'ny mikraoba, saingy aza atao ao anaty lafaoro misy microwave izany, azafady; Izy io koa dia fanoherana ny hatsiaka, azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana, mora tehirizina ny sakafo, ary madio sy milamina ny vata fampangatsiahana; Azo ampiasaina amin'ny kabinetra, oven lafaoro, vata fampangatsiahana ary ...
Kintana fitahirizana sakafo diamondra kitrotro 900ml LJ-3518
LONGSTAR kintana diamondra diamondra fitoeran-tsakafo, vita amin'ny sakafo kilasy fitaovana, dia azo antoka sy mahasalama. Amin'ny tery tsara, ny peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara, raha feno lasopy dia tsy hararaka. Tsy mahazaka hafanana izy io ary mety hafanain'ny mikraoba, saingy aza atao ao anaty lafaoro misy microwave izany, azafady; Izy io koa dia fanoherana ny hatsiaka, azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana, mora tehirizina ny sakafo, ary madio sy milamina ny vata fampangatsiahana; Azo ampiasaina amin'ny kabinetra, oven lafaoro, vata fampangatsiahana ...
Kaontenera misy plastika 370ml (S) LK-2008
LONGSTAR fitoeran-tsakafo plastika vita amin'ny plastika, vita amin'ny akora sakafo avo lenta, azo antoka sy mahasalama izy io, mora ihany koa ny manadio azy. Azo ampiasaina amin'ny lafaoro microwave, vata fampangatsiahana, fanasana vilia sy maro hafa; Izy io dia misy tery tsara, peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara.
Kaontenera plastika 860ml (M) LK-2009
Kaontenera plastika 1700ml (L) LK-2010
Kaontenera plastika 3000ml LK-2011